Wild Life | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE! Wild Life | Oghere Fruity £ 5 + £ 500 FREE!
Wild Life bụ a ezigbo ego n'etinye online mepụtara IGT (International Gaming Technology) nke bụ a na-ewu ewu aha na ụwa nke cha cha egwuregwu. The isiokwu nke oghere dabeere na mara mma ọdịdị nke Afrika na ụmụ anụmanụ bi n'ebe. Ndabere nke ezigbo ego n'etinye online nwere African jungle n'okpuru anyanwụ dara na a pụtara na-egbuke egbuke oroma na-egbukepụ egbukepụ. The soundtrack bụ oké olu na-nwere a typical African flavor ya nke suut ọnọdụ nke game. The eserese bụ a visual ụtọ dị ka jumping Lion na ọtụtụ ndị ọzọ. The egwuregwu atụmatụ ụfọdụ na-akpali akpali bonus atụmatụ jidere gị ntị.
Journey na Wild Life
Wild Life bụ a video oghere na 5 -esi anwụde na 3 ahịrị na-egwuri na 10 ofu paylines. The oghere akara na-e dị ka na-ese foto na-Njirimara dị iche iche ụmụ anụmanụ dị na African jungle. The elu kpọrọ ihe nnọchianya iso nke ihe elephant, a zebra, a girraaf, a enyí ọhịa na a tiger. The Wild akara bụ a ọdụm nke na-egosi na-esi anwụde 2, 3 na 4 naanị. Wild pụrụ ịnọchi anya ihe oyiyi ọ bụla ma e wezụga ihe ikposa. Gbasaanụ akara bụ map nke Afrika Africa . The ala kpọrọ ihe nnọchianya bụ A, K, Q na J. The kacha nta na kacha ego size bụ 0.10 na 100 karị.
Game Atụmatụ na daashi Agba
a ezigbo ego n'etinye online can earn you some big rewards by offering special rewards like Free spins na Ịmụba wilds.
Free spins - Ọ na-triggered site ọdịda 3 ma ọ bụ karịa ikposa akara n'ebe ọ bụla na-esi anwụde n'oge isi egwuregwu. ọdịda 3, 4 na 5 ikposa akara ga-enye gị 10, 15 na 20 free egwuregwu karị. All Enwee Mmeri a ga-okpukpu abụọ na anụ na akara na-ekpochi (ma ọ bụrụ na ọ bụla) ka i elu earnings.
Ịmụba wilds - Ọ bụ dị n'oge isi egwuregwu na-arụ ọrụ site na-a ọhịa akara ke esi anwụde. Wild ọ bụla ukwu ga na-agbasa iji kpuchie ahụ dum ukwu na anụ akara naanị n'ihi ya ga-ị nnukwu Enwee Mmeri.
Multiplier - ma ọ bụrụ na ị na jikwaa ala 5 ma ọ bụ karịa tiger akara, ị ga-enweta 125 × gị mbụ nzọ.
Wild Life awade a nnọọ ezigbo interface na ya African themed ebe-akwado site na mma eserese na catchy soundtrack. The Free spins bonus mma bụ isi nke a ezigbo ego n'etinye online na nwere a oké nwere irite ị nnukwu Enwee Mmeri. It has an RTP percentage of 95% nke bụ ihe zuru iji nke a oghere a shot. Nke a bụ a ezigbo ego n'etinye online nke ị ga-agbalị.